သဘာဝကျကျတုပ်ကွေးကုသရန်3ကုစားပျားရည် - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစား သင့်ရဲ့ကနျြးမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - သဘာဝကျကျတုပ်ကွေးကုသရန်ဖို့ "3 ကုစားပျားရည်
Tele RELAY တစ်ခု 20 စက်တင်ဘာလ 2019
ရာသီအပြောင်းအလဲကာလ, တုပ်ကွေးတိုးဖမ်း၏အန္တရာယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်လက်မှာမိသားစုတစ်စုလုံးအတှကျအခြို့သောထိရောက်သောသဘာဝကရွေးချယ်စရာရှိသင့်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ ကျနော်တို့တုပ်ကွေးကုသရန်ပျားရည်နှင့်အတူသင်နှင့်အတူအချို့သောကုစားမျှဝေပါ။
သငျသညျမှာသဘာဝပျားရည်အစွမ်းထက်ပဋိဇီဝဆေးခဲ့ကွောငျးသိရသလော ဒီငြိမ်းစေလျက်ခိုးအားဖွငျ့ ဒီအစားအစာကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်နှင့်ရန်ပွဲရောဂါခိုင်ခံ့စေဘို့ရှေးဟောင်းဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲ့ဤအချက်ပြုတ်နည်းများအချို့ကိုကြည့်ပါစို့။
ပျားရည်တစ်အလွန်အမင်းအာဟာရအစားအစာဖြစ်ပါတယ် ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အလွန်အစွမ်းထက်သည်အနာပျောက်စေသောသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည် တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်. ပဋိဇီဝဆေးများသာဘက်တီးရီးယားမဟုတ်ဘဲဗိုင်းရပ်စ်ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကြောင့်ဤဤရောဂါကုသရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ထို့အပြင်ဤအစားအစာကိုလည်းတစ်ဦးဓါတ်တိုးခြင်းနှင့်တစ်ခုဆန့်ကျင်ရောင်ရမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာက prebiotic ဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီးနှလုံးသွေးကြော function ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ပျားရည်နှင့်ပန်းခြင်းနှင့်ပထဝီမူလအစအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ၎င်း၏အာဟာရတန်ဖိုးများနှင့်၎င်း၏အဓိကဂုဏ်သတ္တိများကွဲပြားလိမ့်မည်။
သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျနော်တို့ကဒီအစားအသောက်ဗီတာမင်, သတ္တုဓာတ်, polyphenols, အမိုင်နိုအက်ဆစ်, ပရိုတိန်းကြွယ်ဝကြောင်းပြောနိုင်နှင့် အင်ဇိုင်းတွေ။ ကနျြးမာရေးအတှကျအခွားအကျိုးရှိသောအစိတ်အပိုင်းများအနက်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၏ကုသမှု၌ပျားရည်သုံးစွဲဖို့5နည်းလမ်းများ
1 ။ ကုစားပျားရည်နှင့်သစ်ကြံပိုး
တုပ်ကွေးကုသရန်ပထမဦးဆုံးဆေးတစ်လက်ပျားရည်ပြင်ဆင်ထားရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်အရသာအရသာရှိတယ်။ ရုံနှင့်အတူပျားရည်ရောထွေး Ceylon သစ်ကြံပိုး အမှုန့် တစ်ရည်အဖြစ်ပြုမူသော creamy ပြင်ဆင်မှုရရှိရန်။
ဒီစာရွက်ထဲမှာ, ပျားရည်၏ဂုဏ်သတ္တိ၏သူတို့အားဆက်ပြောသည်နေကြတယ် သစ်ကြံပိုးခေါက်၏ဤအမျိုးမျိုး။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ဗိုင်းရပ်စ်အရည်အသွေးတွေ, antibacterial နှင့် antifungal အားဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။ ထို့အပြင်ဤအရောအနှောကိုကျေးဇူးတင်, ကျနော်တို့ခန္ဓာကိုယ်လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်တုပ်ကွေး၏ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဝိသေသကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။
4 ဇွန်း Ceylon သစ်ကြံပိုးမှုန့်ဟင်းချို (60 ဂရမ်)
4 ဇွန်းကုန်ကြမ်းပျားရည်ဟင်းချို (80 ဂရမ်)
2 ပါဝင်ပစ္စည်းများရောထွေးနှင့်တစ်ခုလုံအိုးတလုံးထဲမှာသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပျားရည်ဟာအလွန်ခက်ခဲသည်ဆိုလျှင်သင်တစ်ဦးရေရေချိုးထဲမှာအပူနိုင်ပါတယ်။
တဦးတည်းဇွန်းနေ့စဉ်အစာရှောင်ခြင်းကိုယူပါ။ နှင့်အညီ, တုပ်ကွေး၏အမှု၌, အသီးအသီးမုန့်ညက်မတိုင်မီနာရီဝက်တစ်ဇွန်း။
2 ။ ပျားရည်အတွက် marinated ကြက်သွန်ဖြူ
တုပ်ကွေးကုသရန်ပျားရည်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုစား၏ဒုတိယနှင့်အတူတစ်ဦး maceration ဖြစ်ပါသည်ကြက်သွန်ဖြူ ယုံကြည်သည်။ allicin ပါရှိသည်သောကြက်သွန်ဖြူ, ဖြစ်ပါတယ် ဗိုင်းရပ်စ်များ, ဘက်တီးရီးယား, မှိုများနှင့်ကပ်ပါးကောင်တိုက်ဖျက်ဖို့အလွန်အစွမ်းထက်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုသို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါသည် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါကာကွယ်တားဆီး။
ဒါဟာတုပ်ကွေးတားဆီးသို့မဟုတ်ရောဂါလက္ခဏာစတင်ခြင်းမှာယူရန်ဤကိုးကွယ်ရာပြင်ဆင်ထားရန်အကြံပြုလိုတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်, ငါတို့သည်ရောဂါလက္ခဏာတွေသက်သာခြင်းနှင့်အနာရောဂါငြိမ်းစရာအရှိန်အဟုန်မြှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုအားကောင်း။
10 ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့ (150 ဂရမ်)
ပျားရည်7ဇွန်း (140 ဂရမ်)
ပထမဦးစွာခွံ ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့ နှင့်ဖြာ။
တစ်ဦးလက်ဖက်ရည်ဇွန်းအစာရှောင်ခြင်းကိုယူပါ။ သင်တုပ်ကွေးရှိပါကသင်သည်မည်သည့်အစာခြေအီတွေ့ကြုံခံစားကြဘူးလျှင်သို့မဟုတ်, သင်တစ်နေ့တာတစ်လျှောက်လုံး5လက်ဖက်ရည်ဇွန်းအထိကြာနိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ဖတ်ရန်: ဝက်ခြံပြဿနာကိုကုသရန်ကြက်သွန်ဖြူနှင့်အတူ5ကုစား
3 ။ လိမ္မော်ရောင်, ဂျင်းနှင့်ပျားရည်ပျားရည်ရည်အတွက်ကုစား
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျနော်တို့ add ပါလိမ့်မယ် လိမ္မော်ရောင်၏အရေပြား, ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝသော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်အထွေထွေကာကွယ်ရေးအတွက်တိုးမြှင့်အတွက်အကူအညီများ။ ထို့အပွငျ, ငါတို့သည်လည်းဂျင်းထည့်သွင်းထားပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပူတွေအများကြီးပေးပြီးဖျားနာ၏ကိစ္စများတွင်အသုံးဝင်ကြောင်းကိုတစ်ဦးကအနည်းငယ်အနံ့မွှေးအကြိုင်။
1 လက်ဖက်ရည်ဇွန်းမြေပြင်ဂျင်း (7 ဂရမ်) သို့မဟုတ်လတ်ဆတ်တဲ့ဂျင်းအဝတ်လျှော် (10 ဂရမ်)
ပျားရည်6ဇွန်း (120 ဂရမ်)
ရေသို့မဟုတ်လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်ခွက်၏2(500 ml)
လိမ္မော်သီးနှင့် 30 မိနစ်ရေထဲမှာဂျင်း၏အသားအရေပြုတ်။
ထို့နောက်ပျားရည်နှင့်အနာစိမ်း 15 မိနစ်ထည့်ပါ။ အေးမြ strain နှင့်ကြကုန်အံ့။
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာအိုးတလုံးထဲမှာသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တုပ်ကွေးစဉ်အတွင်းအစားအစာမပါဘဲတစ်နေ့လျှင်3ဇွန်းယူပါ။
သငျသညျယခုတုပ်ကွေးကုသရန်ပျားရည်နှင့်အတူဤအကုစားငါသိ၏။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သူတို့မှာလည်းအဘို့အဖြစ်ကြိုတင်ကာကွယ်ကုသမှုပြုမူ ကာကွယ်ရေးအားကောင်းလာစေရန်. အကောင်းဆုံးကိုဆေးဝါးကောင်းတစ်ဦးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကြောင်းကိုသတိရပါ။
တုပ်ကွေးကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့, ကညမှာငြိမ်ဝပ်စွာနေရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ကောင်းသောအလေ့အထများကိုလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Read more »